सपनीमा मरेका मानिस किन आउँछन् ? - Sawal Nepal
सपनीमा मरेका मानिस किन आउँछन् ?
एजेन्सी २९ पुष २०७६, मंगलवार १४:४२
एजेन्सी/ जीवन र मरण जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो । जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ । आफूनजिक रहेका मृत व्यक्ति कहिलेकाहीँ सपनामा आउँछन् । यस्तो अनुभव अनौठो रहस्यमय हुन्छ ।